निष्कर्ष आयो, एनएमबि बैंक हरेक तवरले सुरक्षित छ - Aarthiknews
सुनिल केसीः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनएमबि बैंक
पछिल्ला दिनमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा एउटा फरक खालको विज्ञापन बजिरहेको छ । साना तथा मझौला कर्जा प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको विज्ञापनले धेरैले ध्यान आकर्षित गरेको छ । कृषक आफ्ना कृषि उपज व्यापारीलाई बिक्री गरिरहेका छन् तर त्यहीमध्येकी एक कृषक अर्थात् रङ्गमञ्चकी कलाकार लक्ष्मी बर्देवा आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज व्यापारीलाई बेच्न छाडेर आफैँ उद्यम गर्न थालेका छनछ । यही सामान्य लाग्ने विषय समेटिएको विज्ञापनले भन्ने सन्देश हो, ‘साना तथा मझौला उद्यम गर्न चाहुनुहन्छ भने एनएमबी बैंकमा आउनुस् र सहजै कर्जा लिनुस् ।’
बैंकिङ क्षेत्रका शुरुआती दिनहरु अहिले जस्तो सहज थिएन । तीनवटा सरकारी बैंक थिए भने तीनवटा निजी क्षेत्रका त्यसमा पनि विदेशी लगानीका बैंक थिए । बैंकिङ कारोवार गर्न असाध्यै गाह्रो थियो । उपभोक्ता बैंक खोज्दै जानुपर्दथ्यो तर अहिले बैंकहरुले ग्राहक खोज्दै हिँडेका छन् । तत्कालीन ग्रिन्डलेज बैंक हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सहायक पदबाट बैंकिङ करियर शुरु गरेका केसी यतिबेला एउटा सफल बैंकरका रुपमा चिनिन्छन ।
जीवनका पयो खोल्दै जाँदा उनले सफलताका कथा मात्रै सुनाउनु भएन भीषण दुःखका पत्र पनि खोल्नुभयो । जीवन सिकाइ हो, अनुभवले खारिँदै जाँदा दुःख पनि सुखमा परिणत हुँदै जान्छन्, मैले सिकेको जीवनमन्त्र यही हो, भाग्यले यहाँसम्म पु¥यायो, केसीको मुहारमा विगतमा ती दिन ताजा बनेर आए ।
जतिबेला सामान्य एलसी खोल्नसमेत महिना दिन लाग्थ्यो, ग्राहकहरु भौँतारिँदै हिँड्थे । बैंकका कर्मचारी कुनै छुट्टै ग्रहबाट आएका जस्ता थिए । समयले परिवर्तन ल्यायो, सोच बदलियो, मान्छेका चाहना र अवसर पनि बदलिए । बैंक उद्योगका रुपमा विकास हुँदै गयो, आज म जहाँ छु, त्यो मेरो मेहनतको परिणाम हो, केसी विगतमा हराए । भने, “सहायक पदबाट जागिरे जीवन शुरु गरेको मेरा लागि बैंकको उच्च पद प्राप्त हुनु नै सफलताको उच्चतम विन्दु हो । मेरा लागि परिवारको सहयोग, अनि भाग्य दुवै सफलता कारक बने । सिकारु मेरो चरित्र आज पनि उस्तै छ ।”
उनले आफ्नो आनीबानीका बारेमा समेत बताए । केही समय स्ट्याण्र्डड चार्टडमा गुजारेपनि एनमएबी फाइनान्स हुँदै विकसित भएको आजको एनएमबी बैंकका हरेक शाखामा काम गरेको अनुभव पनि उहाँका लागि सहयोगी बने । “म सेलीब्रेटी होइन, तर अवसरको भने सदुपयोग गरे । यो नै मेरो जीवनको सफलताको यात्रा हो । तपाई यसलाई के भन्नुहुन्छ आफँ भन्नुस्”, उनले हामीतिर नै आफ्नो प्रश्न छाडिदिए । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब २६ करोड नाफा आर्जन ग¥यो । ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभेपछि सञ्चित मुनाफा रु ५४ करोड ८९ लाख र शेयर स्वाप अनुपातबाट रु ६० करोड ३६ लाख जगेडा कोषमा राखेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा क्रान्ति नै ल्याएको नेपाली साझेदार सहितको होङ्सीमा नेपाली बैंकहरुले रु १६ अर्ब लगानी गरेका छन् । त्यसमा एनएमबीले मात्रै ६ अर्ब ७५ करोड लगानी गरेको छ । सिडिसीको नेपाल प्रवेश पनि सोही बैंकबाट भएको हो । गत फागुनमा सिडिसीले बैंकलाई रु एक अर्ब ५० ऋण दिएको छ । त्यो सिडिसीको पहिलो लगानी थियो ।
देशको विकासका लागि पहिले आन्तरिक स्रोतको जोगाड गरौ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको छ एनएमबीले । गत वैशाख १ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीले शुरु गरेको सबै नेपालीको बैंक खाता अभियानले सार्थक सफलता पाइरहेको छ । पूँजी निर्माण गर्ने र बैंकिङ पहुँच पु¥याउने त्यो एउटा सुवर्ण अवसर नै थियो । खर्च गर्ने मात्रै होइन बचत गर्ने पनि बानी पनि बसाल्ने अभियान हो त्यो । ‘खोलौ खाता’ भन्ने नाराले बैंकिङ उद्योगलाई सहयोग गरेको छ ।
बैंकले कृषिको अलावा ऊर्जा क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरेको छ । जलविद्युत्का अलावा वैकल्पिक ऊर्जामा पनि ध्यान दिएको छ । नेपाललाई मध्यस्तरीय आय भएको देश बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै ऊर्जा हो । पछिल्ला १५ वर्षमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीले ठूलो योगदान गरेको छ । व्यापारिक घराना पनि ऊर्जामा लगानी गर्न आएका छन् । त्यसमा एनएमबी बैंकको ठूलो साथ छ भन्छन केसी ।
सो बैंकले मात्रै ४० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरेको छ । रु १६ अर्ब बराबरको कर्जा प्रतिबद्धता जनाएको छ । एनएमबी बैंकको साझेदार संस्था पनि ऊर्जामा लगानी केन्द्रित गर्न चाहन्छ । डचहरुको वित्तीय संस्थासँग एनएमबी बैंक जोडिएको छ । नेदरल्यान्डको एफएमओ बैंकको साझेदार हो । सो संस्थाको १५ प्रतिशत शेयर एनएमबीमा छ । दिगो विकास गर्न दीर्घकालीन लगानी गरौ भन्ने उनीहरुको सोच छ । ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुको पछाडि सोही कारण भएको केसी बताए ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यलाई पछ्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था लागेका छन् । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा जम्मा पार्दा पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्माण गर्ने स्रोत जम्मा हुँदैन । लगातार आठदेखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । उनले ‘क्वान्टम लिप’को कुरा गरे । नेपालको पूँजीले मात्रै त्यो छलाङ हान्न नसक्ने अवस्था छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण लिन डराउनु हुँदैन तर त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ उनले सुनाए। नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ऋण छ । अरू देशले ७५ प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिएका छन् ।
गत आवमा मात्रै १३ खर्ब जतिको व्यापार घाटा भयो । त्यसलाई घटाउने दायित्व सरकारको मात्रै होइन होला रु हाम्रो पनि हो भन्ने ठानेर आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधि बढाउन केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । “विदेशबाट आएको भन्दा ठूलो परिणाममा पैसा विदेशिएको छ । त्यसलाई रोक्न केही न केही त अवश्यै गर्नुपर्छ नि रु”, उनले भने । कूल ३०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरेको छ । साना, मझौला र मध्यमस्तरका उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रदेश–१, प्रदेश–५ र गण्डकीमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ बैंकले । भौगोलिक हिसाबले बजार पहुँच विस्तारका लागि मर्जरमा गएको केसी विस्तारमा सुनाए । बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्ता सरकारले प्राथमिकता दिएका नै हुन् ।
गाडी किन्न पैसा माग्न आयो भने सहजै दिने तर केही उद्यम गर्छु भन्नेलाई धितो खोज्ने प्रवृत्तिको कहिले अन्त्य हुन्छ होला ? हाम्रो अर्को प्रश्न थियो केसीसँग । सो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसी केही क्षण चुप लागे । “बाहिरबाट हेर्दा सवारीसाधनमा भएको लगानी अनुत्पादक नै लाग्न सक्छ तर संसारभर नै अटो फाइनान्सिङ भइरहेको छ । त्यसले आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ भन्ने पनि देखिन्छ तर हाम्रोमा बाध्यता छ । सार्वजनिक सवारीको अवस्था बेहाल छ । मानिसहरु गाडी नै नभए पनि मोटरसाइकल भने पनि किनौँ भन्ने अवस्थामा छन्”, उनले भने ।
एकल विन्दुमा ब्याजदर ल्याउने विषय पनि बजारले नै निर्धारण गर्ने कुरा भएको उनको भनाइ छ । बढी ब्याजदर भएको कुरा गलत हो । हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ”, उनले स्पष्टिकरण दिने शैलीमा भने ।
विश्वभर नै साइबर सुरक्षाको विषय अहम् बनेको छ । जस्तोसुकै सुरक्षा प्रणाली जडान गरे पनि सुरक्षाको पर्खाल तोड्नेसँग त केही लाग्दैन । एनएमबी बैंकले के गरिरहेको छ ? हाम्रो स्वाभाविक प्रश्न थियो । विश्वभर नै बैंकिङ सुरक्षाको प्रश्न उठिरहेको छ । बैंक विश्वासको व्यापार हुने क्षेत्र पनि हो । लगानीकर्ता र निक्षेकपर्ताको विश्वास पनि टुट्छ । जस्तोसुकै सुरक्षा प्रणाली राख्दा पनि ह्याक भइरहेको छ । केही समयपहिले चिनियाँ ह्याकरले प्रणाली नै झण्डै सिध्याएका थिए । सचेत देखिन्छन केसी । निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्ने दायित्व एकातिर छँदैछ । अर्कोतिर बैंकले जर्मनीको एक सेक्युरिटी अडिट गर्ने कम्पनीलाई बोलाएर अडिट गरायो । त्यसको निष्कर्ष आयो, एनएमबी बैंक हरेक तवरले सुरक्षित छ । आइएसओ मान्यता मान्यता प्राप्त बैंकको प्रमाणपत्र पनि पायो । ‘बैंक अफ दी इयर’को पटक पटक मान्यता पाएको सो बैंकले सुरक्षाका लागि दुई–चार करोडको लोभमा फसेको छैन । केही रकम लोभ गर्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्ने पक्षमा छैन बैंक ।
“फरक प्रणाली र कार्यशैली भएका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गराउनु जटिल विषय हो, तेरो र मेरो भन्ने हुँदोरहेछ”, उनले अनुभव सुनाए, “राम्रो योजना भएन भने जटिलता हुन्छ तर हामीले सबैलाई मिलाएर ल्याएका छौँ । कर्मचारीलाई तेरो र मेरो भन्ने गरेका छैनौं । फरक चिन्तनमा काम गर्नेको मनोविज्ञान बुझेर परिचालन गरेका छौँ । सांस्कृतिक रुपमा एक ठाउँमा ल्याउने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ”, उनले भने ।
नेपाली बैंक पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर स्रोत जुटायो । नेपालका बैंकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त स्थापित संस्थाबाट रेटिङ भएको थिएन । त्यसैले सबैका लागि त्यो नयाँ काम थियो तर अप्ठेरासँग जुधेर बैंकले विदेशबाट पैसा ल्यायो र लगानी गरेको सगौरव बताउछन केसी । “विदेशीले पनि पत्याउँदा रहेछन, पैसा ल्याउने हैसियत पनि राख्दोरहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । त्यस्तो सन्देश प्रवाहले अन्य प्रकारका व्यवसाय विस्तारका लागि हामीले अवसर पायौँ”, उनले भने ।
नेपाली बैंकहरुको व्यवसाय खासगरी नेपालभित्र मात्रै केन्द्रित छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली बैंकहरु बहुराष्ट्रिय बैंकसँग नै निर्भर छन् । नेपालको निर्यात तथा आयात व्यापारलाई अझै सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालका बैंकहरुले विदेशका महत्वपूर्ण र व्यापारिक हिसाबले रणनीतिक महत्वका बजारमा उपस्थिति जनाउनु अत्यावश्यक छ । रासस